IHoover H-purifier 700, ukubuyekezwa kwale purifier enkulu yomoya | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 05/06/2021 10:00 | Kubuyekezwe ku- 27/05/2021 21:24 | General, Izibuyekezo
Izinto zokuhlanza umoya ziwumkhiqizo oya ngokuya uthandwa kakhulu, ikakhulukazi ngalesi sikhathi lapho impova iba yisitha sokuqala sezakhamizi ezingezwani nezinto ezithile. Kwenzeka okufanayo lapho sikhuluma ngamadolobha amakhulu, lapho ukungcola kungaveza khona amazinga amagesi emakhaya angakulungele impilo yansuku zonke futhi angadala izifo.
Sisanda kuhlaziya ezinye izindlela ku-Actualidad Gadget, futhi namhlanje siletha i- IHoover H-purifier 700, isihlanzisi somoya esinosayizi omkhulu futhi kufaka phakathi i-humidifier phakathi kwezinye izinzuzo. Thola nathi amaphuzu avelele, futhi nobuthakathaka bawo.
2 Izici zobuchwepheshe nokuhlunga
3 Sebenzisa nezindlela
4 Okungeziwe nombono womhleli
IHoover iyinkampani yendabuko, ongathanda ukuyikhumbula ngempumelelo yayo enkulu yokuhlanza umshini esikhathini esedlule. Njengamanje uhla lwemikhiqizo yalo luvuselelwe kakhulu, phakathi kwabo sithola ifayela le- U-H-purifier, isihlanzisi somoya esimile mpo futhi esise-quasi-cylindrical. Indawo engezansi ngeye-grille yokudonsa isihlungi ngombala wesiliva, ekubeni ingu-plastic. Kwenzeka okufanayo nasengxenyeni engenhla, ipulasitiki emhlophe lapho sithola khona izibambo ezimbili ezihlehlisekayo zokuhamba, imininingwane yokusebenza nendawo ephezulu, lapho kwenzeka khona umlingo.
Imibala: Isiliva / Isiliva + Okumhlophe
Isisindo: I-9,6 Kg
Ubukhulu: I-745 * 317 * 280
Le ndawo engenhla ine-grille ehlanzekile yomoya nephaneli yokulawula ene-LED eyisiyingi ezokhombisa isimo. Sinokusebenza okuhlukahlukene kule phaneli yokuthinta esizokhuluma ngayo ngokuhamba kwesikhathi. Ingxenye engemuva ishiywe ngokuqagela nekhava yokuhlunga. Lapho uyisusa, sizothola uhlelo lokuqoqwa kwentambo nalo oluthokozwayo kakhulu, noma kunjalo, siphuthelwe ikhebula elikhudlwana ngokubheka uhlobo lomkhiqizo esibhekene nawo. Njengoba ine-reel othomathikhi, ikhebula alinakuthathelwa indawo yinye ende.
Izici zobuchwepheshe nokuhlunga
Le Hoover H-purifier 700 ifaka ukuxhumana kwe-WiFi ne-Bluetooth ngendlela ehlangene yokusetshenziswa ngohlelo lokusebenza, into emangazayo ngenxa yokusebenza kwayo okuhlukahlukene. Futhi inenzwa yokuqwashisa ngamazinga aphezulu e-carbon dioxide, kanye nenzwa yokushisa kanye nomswakama, into ethokozwayo uma kubhekwa indawo okuyo lo mkhiqizo nokuthi lubaluleke kangakanani lolu hlobo lwedatha ekusetshenzisweni kwansuku zonke. Ngakolunye uhlangothi, sinenzwa yezinhlayiya engu-2,5 no-10 nm. Ngokwami, Ngicabanga ukuthi lowo ono-PM 2,5 ngabe wenele.
Intengo yokuhlunga: ama-euro angama-59
Phezulu sinesiboniso esizosazisa ngekhwalithi yomoya ngesikhathi sangempela. Sinezexwayiso zokugcinwa kwesihlungi, esizoxoxa ngazo ngezansi. Sinezingqimba ezintathu zokuhlunga ngesihlungi sangaphandle esingagezeka, isihlungi se-Hera H13 nesihlungi sekhabhoni esisebenzayo lokho kuzosivumela ukuthi siqhubeke nokungasebenzi kwempova, okuthakazelisa kakhulu kulabo abanenkinga yokungezwani komzimba. Ngakho-ke, le divayisi kufanelekile ukuthi izikhala zifike kumamitha ayi-110, siyivivinye ezindaweni ezingamamitha-skwele angama-55. Inokususwa kwe-VOC futhi umkhawulo wamamitha ama-cubic ahlanzekile ngehora uzoba ngama-330, iqeda izinhlayiya ezingama-99,97% ezinhle.
IHoover H-purifier 700, ongayithenga ku-Amazon, Inamamodi amathathu ayisisekelo: Ubusuku, i-Auto ne-Maximum, okuzolungiswa ngephaneli yokuthinta nangokusebenzisa uhlelo. Noma kunjalo, Sizophinda futhi sibe ne-humidifier nephunga lokuhambisa iphunga, esingalekelela ngemikhiqizo efakwe kuphakheji. Kuyinto yokwengeza ethokozisayo ye-humidifier engekho kangako ezindaweni eziningi zokuhlanza umoya ezisezingeni eliphezulu, ngakho-ke ingeziwe.
Landa uhlelo lokusebenza oludala lweHoover
Landa uhlelo lokusebenza olusha lweHoover
Ngokwengxenye yayo, ngokusebenzisa i- Aplicación singakwazi ukulungisa i-H-purifier ukuze siyisebenzise ngabasizi ababili abathandwa kakhulu, esikhuluma ngabo I-Amazon's Alexa neGoogle Assistant. Kuzona zozimbili lezi zimo, izofakwa kuhlu lwethu lwamadivayisi futhi izosivumela ukuthi sicishe futhi sicime idivayisi ngentando, siphinde sihlele ukusebenza ngaphezu kwesicelo esinikezwe uHoover uqobo. Uhlelo lokusebenza lungathuthukiswa, lune-interface yomsebenzisi esikhumbuza eminye imikhiqizo eminingi evelele yemvelaphi yase-Asia, noma kunjalo, iyakwenza lokho ekuthembisayo.
Okungeziwe nombono womhleli
Sine-H-purifier 700 uhla lwe-H-Essence, okuwuchungechunge lwamabhodlela amancane kawoyela abalulekile azobekwa ngqo, nebhodlela likumshini wokuhambisa. Lokhu kusho ukuthi ngombono singasebenzisa kuphela amafutha abalulekile weHoover njengoba ibhodlela lingena kudivayisi. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi ungaligcwalisa leli bhodlela uma ufisa ngamafutha abalulekile avela eceleni, into engiyincomayo yokonga izindleko. Lokhu akunjalo ngesihlungi, okubonakala sengathi siphathelene ngokuphelele, kepha asikweluleki ukuklwebha, ikakhulukazi kulokhu ngoba intengo iyabiza uma kuqhathaniswa nezimbangi ezisemakethe. Siphinde sibe ne-H-Biotic, uhla lwezinto zokubulala amagciwane kanye nama-probiotic afakwa kumshini wokuhambisa izinto.
Ukugeleza komoya kuthiwa yi-360º, noma kunjalo, izinzwa zinginike izilinganiso ezihluke kancane kuneminye imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Ipayipi lomoya elihlanzekile alibonakali linamandla njengoba kungalindelwa kumkhiqizo othembisa ukufika kuma-cubic metres angama-300 ngehora, ngaphezu kwalokho, lokhu kuzokuphazamisa kakhulu ukuthula, okuvunyelwa ngejubane eliphansi, kepha ngemodi yasebusuku njengoba bengilindele. Kubantu abanobunzima bokulala benomsindo, i-H-purifier izodinga ukucishwa. Lokhu kube isipiliyoni sethu nge-H-purifier 700.
Le H-purifier isinikeza enye indlela ngezindleko ezingabizi kakhulu, ezingasindisanga kokungeziwe okufana ne-humidifier, izinzwa noma i-dispenser ye-essence, kepha kweminye imininingwane ihlala iyisinyathelo esingezansi kwabanye abahlanzayo abasezingeni eliphakeme njengeDyson noma uPhilips. Kodwa-ke, umehluko wamanani udume kabi futhi usinikeza namandla amaningi. Okubi kakhulu kokuhlangenwe nakho kwethu uhlelo lokusebenza, okungenani enguqulweni yalo ye-iOS. Ungathola i-H-purifier 700 kusuka kuma-euro angama-479 ku-Amazon.
Kuthunyelwe ku: 5 Juni ka-2021
Ukuxhumana nohlelo lokusebenza
Inombolo enkulu yezinzwa
Ikhebuli elifushane ngokuqhathaniswa
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » IHoover H-purifier 700, ukubuyekezwa kwale purifier enkulu yomoya
I-Huawei Watch 3 neFreeBuds 4, ukubheja ekugcineni okuphezulu kokugqokekayo